Masar oo sheegtay in Saudi Arabia shidaalka aadka loogu baahan yahay ka goosatay iyadoo loo sheegin sababta. - iftineducation.com
iftineducation.com – Dowlada Sacuudiga ayaa gebi ahaan jartay shidaalkii ay siin jirtay dowlada Masar.
Boqortooyada Sacuudiga oo horey taageero dhaqaale iyo militari u siin jirtay Dowlada Militariga Masar ee Cabdifatax Al Sisi ayaa si weyn uga careysan go’aanka Xukuumada Masar ku taageertay qorshaha Qaramada Midoobay ee xasilinta dagaalka ka socda Siiriya.
Sacuudiga oo taageero xoogleh siiya xoogaga Mucaaridka ee ka dagalamaya Siiriya ayaa kasoo horjeeda in wax wadahadal ah lala galo xukuumada Bashar Al Assad ee Siiriya, balse qaar kamid ah xubnaha Golaha Amaanka ayaa taageeraya in wadahadal loo furo Mucaaridka Siiriya ee hubeysan iyo Dowlada Bashar Al Assad.
Dowlada Masar ayaa hada kamid ah 15ka wadan ee xubnaha ka ah Golaha Amaanka.
Dagaalka Siiriya, Sacuudiga iyo Qatar Dagaalka Siiriya ayaa la rumeysan yahay inuu salka ku hayo qorshe dheer oo ay damacsan yihiin dalalka Khaliijka gaar ahaan Qatar iyo Sacuudiga oo doonayey inay dhuun shidaal iyo gaaska-dabiiciga ah qaada ay mariyaan wadanka Siiriya iyo Turkiga si ay gaaskooda ugu iib geeyaan suuqa weyn ee Midowga Yurub.
Qorshahan oo loo yaqaan QATAR-Turkey Pipline ayaa diyaarintiisa bilowday sanadkii 2000, waxayna sanadkii 2009 ay ugu danbeyn ku heshiiyeen dalalka Sacuudiga, Qatar, Turkiga iyo Jordan (Urdun), in dhuun qaada Gaaska laga sameeyo dalalkaasi balse waxaa ka hortimid dowlada Siiriya ee Bashar al Assad oo horey qorshahan wax uga ogeyd, balse heshiiskan ka baxday kadib markii Bashar Al Assad cadaadis uga yimid dowlada Ruushka.